Thread: [mm]&cdkifjynfe,fodkY tvnfwpfacguf[/mm]
09-24-2010 04:44 AM #141
]]avmueE´mapwD}} yg udkat;pufa&../ OD;cifnGefU vufxufu wnfcJhwm qdkygawmh/ pum;rpyf tJ'D tem;rSm "n0wDuGif; qdkwm &dSao;w,f/ w&Ha&m tcgu ausmif;om; tm;upm; yGJawmfawGeJU NcdrfhNcdrfhoJoJ &dScJhzl;oaygh/ ckawmhvJ ]NyD;cJhygNyD.. NyD;cJhygNyD..} aygh/ tif; tcsdKU tcsdKUolawGvJ udkarmifarmifh EGm;EdkUqdkifem;u ppfawG awm& ausmif;BuD;rSm oDwif;oHk;vdkU aumif;wkef;udk;Asm/
tckawmh tJ'D "n0wDuGif;ab;em;rSm ppfawG blwmMuD; aqmufzdkY vsmxm;ygw,f/ ppfawG a&csrf;jyif &xm;uawmh txu4(vdkYxifw,f) uae pxGufygw,f/ wpfaeYudk ESpfacguf ajy;qGJay;ygw,f/ rdk;&Gm&if a&jrSyfwJh v,fajrawGxJ ajrzdkYjyD; jzwfazgufxm;wmyg/ rdk;wpfcg &Gmvdkuf? zdkYxm;wJh ajrawG a&pD;xJ ygoGm;vdkufeJY/
blwmpOfawG &xm;0ifawmhr,fqdk&if &xm;pD;zdkYtwGuf blwmqDudk tajy;vmaewJh vltkyfMuD;udk jrifvdkuf&if udk,fudkudk,f jrefrmjynfxJrSm vdkawmif rxifrdawmhbl;/ tm&yf wdkif;jynf wpfckckudkrsm; a&mufaeovm;udk xifrdw,f/ a,mufsm;awGMuD;bJ? acgif;pnf;? acgif;tkyfeJY 0wf&Hk&SnfMuD;awG wzg;zg;eYJ ajy;jyD;awmh tkyfpkvdkuf vmaeMuwm avm&ifh atmzf tma&As &kyf&Sifawmif jyefowd&w,f/
09-24-2010 04:52 AM #142
ppfawGeJU ausmufjzLMum;uqkd&ifawmh z&HkumuRef;pkawGjzpfr,fudkat;puf/
atmufyHku uRef;tauG;uav;u tjyifbufqHk;u uRef;jzpfr,f/
usaemfvnf; odyfodvGef;vdk 0ifajymwm r[kwfygbl;? 'gayrJh tJ'D tao;qHk; uRef;auG;av;u z&Hkum uRef; 3ckxJvdk rxifyg/ z&Hkum3ckpvHk;u awmfawmfudk MuD;ygw,f/ jyD;awmh tauG;awG? twufawG &Sdayr,f uRef;wpfckvHk;udk jcHKMunfh&ifawmh &Snf&Snf ajzmifhajzmifhyg/
12-07-2012 06:22 PM #143
ရခိုင်သရက်လေး ..ဖုန်ခါပြီး...ပြန်လည် အသက်ဝင်..အောင်..သတင်းတပုဒ်ဖတ်မိသမျှ မျှဝေပါရစေ...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ..စစ်တွေ..ကျောက်ဖြူနဲ. ..သံတွဲ..မြို.ကြီး(၃)မြို.ကလွဲလို. ..ကျန်တဲ.မြို.တွေ လျှပ်စစ်မီးပုံမှန် မရပါ
ကျန်မြို.နယ်တွေမှာ .မြို.နယ်မီး စက်တွေကနေ ဒီဆည်အင်ဂျင်ကြီးတွေနဲ.လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ည၆နာ၇ီမှ ည၁၀နာရီထိလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးဝေပါတယ် .. ..(ခုတော.ပြည်နယ်မြို.တော်..အမ်းဖြစ်နေလို.အမ်းမြို. လည်းလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရနေလောက်ပြီလို.ထင်မိပါတယ်)
ရခိုင်ပြည်လျှပ်စစ်မီး ရရှိဖို. ..တောင်းဆို ခဲ.တာ ..မနှစ်က သတင်းတွေထဲမှာဖတ်မိခဲ.ကြမှာပါ ..
ဒီတပါတ်အတွင်း ...ရခိုင်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ..ရရှိရေးအတွက်..မဟာဓါတ်အားလိုင်း စနစ်သွယ်တန်းဖို. သတင်းတပုဒ် ဖတ်ရပါတယ် ..၂၃၀ ကေဗီ မဟာဓါတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းမယ်လို. ..ဖတ်ရပါတယ် ..
ပုဏားကျွန်းမြို.မှာ ..၂၃၀ ကေဗီ မဟာဓါတ်အားလိုင်း ..ဓါတ်အားခွဲ ရုံတည်ဆောက်ဖို. ...စတင်တည်ဆောက်နေပြီလို. သတင်းဖတ်ရပါတယ် ..
ပုဏားကျွန်းမြို.ဟာ စစ်တွေမြို.အနီးတည်ရှိပြီး ..စစ်တွေ ...ရသေ.တောင် ..ဘူးသီးတောင်..ကျောက်တော်..မြောက်ဦး..မင်းပြား..ြေ မပုံ မြို.တွေ ရဲ. အလည်မှာ တည်ရှိတာမို. ....ပုဏားကျွန်း၂၃၀ ကေဗီ မဟာဓါတ်အားလိုင်း ..ဓါတ်အားခွဲရုံမှ..တဆင်....အဆိုပါမြို.တွေ ကိုဓါတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းပြီး..၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိစေတော.မှာဖြစ်ပါတယ်...
ရခိုင်ပြည်(သို.မဟုတ်)ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို .တွေ အတွက် အကျိုးရှိမည်.စီမံကိန်းတခုပါ...
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင်. ပါတ်သက်ပြီး ..ဖြစ်စေချင်တဲ.ဆန´ တခုကတော. ရန်ကုန်စစ်တွေ လမ်းကို မင်းပြားမြောက်ဦးကျောက်တော် ပုဏားကျွန်းမြို. ကိုပတ်သွားနေမည်.အစား ...မင်းပြားပေါက်တော ...မှတဆင်. ပုဏားကျွန်းမြို. ကိုဖြတ်ပြီး ..စစ်တွေ ကို အတိုဆုံး ..လမ်းကြောင်း ..သစ်တခု ..ဖေါက်လုပ်စေချင်သည် ..
အခက်အခဲ အတားအဆီး တခုကတော. ..ကစäပနဒီဖြစ်(ကုလားတန်မြစ်)ကို ..ပုဏားကျွန်းမြို. မှာ တံတားရှည်ကြီး တစင်းဖြတ်ကူး ရမှာဖြစ်ပါတယ် ...ဒါဟာလည်းမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ ...၂ မိုင်ရှည်တဲ. ဧရာဝတီ တံတားကြီးတွေ ထိုးနိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ.ဒီခေတ်မှာ ..ပုဏားကျွန်းမြို. .ကစäပနဒီဖြစ်(ကုလားတန်မြစ်)တံတားဟာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ. ..လုပ်ငန်းတခုပါ ...ဒီတံတားသာဖြစ်လာခဲ.ယင် ..စစ်တွေ-ရန်ကုန်လမ်းဟာ ..ကျောက်တော်မြောက်ဦးဖက်က ပတ် သွားစရာ မလိုပဲ ..များစွာတိုတောင်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ..ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အတွက် များစွာ အကျိုးရှိမှာပါ ...
Last edited by thuthuaung; 12-08-2012 at 10:37 AM.
Botazan, Grace, GuruAM, happyvalley, honelay86, Jim, MNO.BN, mokenlay, myawlwint, NEO, Peach, PiNyat, RunAtServer, THARGYII
05-11-2013 05:19 AM #144
Thanked 255 Times in 11 Posts
ရခိုင် ပြည်က ပင်လယ်တွေ တကယ်ကို လှပါတယ် ၊ ကမ်းခြေ လဲ တော်တော် သဲဖြူပါတယ်၊ အဓိက ကတော့ ပြည် မ နဲ့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး လို့ ပြော ရမလို ဖြစ်နေပါတယ်၊
ကား လမ်းက လဲ အလွန် ဆိုးတဲ့အပြင် ၊ မကြခန လဲ မှောက်တာ ပြုတာ ရှိနေတော့ မသွား ရဲကြဘူး
လေယာဉ်ကျတော့လဲ စရိတ်က ကြီးမား တဲ့အပြင် အချိန်လဲ မမှန်တော့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည် တောင် မဟုတ်ပဲ မြန်မ ပြည်တွင်းက လူတွေ ကိုပါ ဆွဲဆောင်ဖို့ အတွက် အချိ်န် ယူနေရ သေးပါတယ်
လုံခြုံရေး ကလဲ တဖက် ဆိုပေမဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေ ကတော့ ဒီလောက် အဆိုးကြီး မဟုတ်ဖူး ထင်တာပါပဲ၊ တခြား နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှုဉ်လိုက်ရင် သိပ် မဆိုးပါဘူး
ရခိုင်စာ လဲ စားကောင်းတယ် ၊ ပင်လယ်လဲ လှတယ် ၊ ရှေးဟောင်းအမွေ တွေလဲ ရှိတယ်
abya, fridayborn, MNO.BN, nyanmoe